Home အထွေထွေ AM ခန့် မှန်းပြိုင်ပွဲ
Arsenal Myanmar | All of Arsenal fans from Myanmar.
အဖွင့် ဖိုရမ် သတင်းနှင့်အင်တာဗျူးများသတင်းများ ဒဏ်ရာသတင်းများ အင်တာဗျူးများ ဆောင်းပါးပွဲကြိုသုံးသပ်ချက် ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက် အထွေထွေဆောင်းပါး မှတ်တမ်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (ဟိုက်လိုက်) မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ပွဲစဉ်များ ပထမအသင်းကစားသမားများ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်များ အထွေထွေAM ခန့် မှန်းပြိုင်ပွဲ AM ခန့်မှန်း ပြိုင်ပွဲ ဇယား Fan Club AM ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲ
Arsenal Myanmar Fantasy League 2015-16	Arsenal Myanmar	၂၀၁၀ လောက် ကတည်းက စတင်ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ www.arsenalmyanmar.com / Arsenal Myanmar Official Supporter Club ရဲ့ နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကျ ဖြစ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Fantasy Premier League ကို ဒီနှစ်မှာလည်း ဆက်လက် ကျင်းပ မည်ဖြစ်သည်။ Register ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်း အဆင့်ဆင့်ကို အောက်တွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင် ပါသည်။
အာဆင်နယ်ဖန်များသီးသန့် အတွက် တည်ထောင်ထားသော ဆိုဒ်ဖြစ်ခြင်း ၊ ပေးအပ်သော ဆုများမှာ အာဆင်နယ်ဖန်များ အတွက် အာဆင်နယ်အမှတ်တရ ပစ္စည်းများသာဖြစ်ခြင်းအတွက် အာဆင်နယ်ဖန် သီးသန့်သာ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြု ထားပါသည်။ ဆုများ ပေးအပ်သောအခါ အာဆင်နယ်ဖန် မဟုတ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိလျှင် ဆုပေးခြင်းကို ပယ်ဖျက်ပြီး နောက်မှ လူများကို အစဉ်တိုင်း ပေးအပ် သွားပါမည်။
ယခုနှစ်ကျင်းပမယ့် အာဆင်နယ်မြန်မာခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲကို www.premierleague.com မှ Fantasy game ကို အခြေခံပြီး ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ တချို့ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့ ဘယ်လိုဝင်ပြိုင်ရမယ်ဆိုတာ မသိတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် အာဆင်နယ် မြန်မာဖန်တွေအတွက် ပြိုင်ပွဲ ၀င်ပုံ အဆင့်ဆင့် ကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ Fantasy Premierleague account ရှိပြီးသူများသည် အဆင့် ၃ နှင့် ၄ ကိုသာ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါ သည်။ ပြီးခဲ့သောရာသီက ပြိုင်ပွဲဝင်သူများဟာ ဒီအတိုင်းပဲ ပြန်ကစားနိုင်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ရန် မလိုအပ်သော်လည်း re-register ပြုလုပ်ရပါလိမ့်မည်။
Arsenal Myanmar Fantasy League 2014-15	Ranger	www.arsenalmyanmar.com နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကျ ဖြစ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲအဖြစ် ဒီနှစ်မှာလည်း Fantasy League ကို ဆက်လက် ကျင်းပ မည်ဖြစ်သည်။ Register ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်း အဆင့်ဆင့်ကို အောက်တွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင် ပါသည်။(မနှစ်က 2013-2014 အတွက် ကျနော်တို့ အဆက်အစပ် ပြတ်သွားတဲ့အတွက် အဆင်ပြေရင်တော့ ဆုရ စာရင်းကို ပြန်ရှာပြီး ဆုများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပေးဖို့ ကြိုးစားသွားပါ့မယ် )အာဆင်နယ်ဖန်များသီးသန့် အတွက် တည်ထောင်ထားသော ဆိုဒ်ဖြစ်ခြင်း ၊ ပေးအပ်သော ဆုများမှာ အာဆင်နယ်ဖန်များ အတွက် အာဆင်နယ်အမှတ်တရ ပစ္စည်းများသာဖြစ်ခြင်းအတွက် အာဆင်နယ်ဖန် သီးသန့်သာ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြု ထားပါသည်။ ဆုများ ပေးအပ်သောအခါ အာဆင်နယ်ဖန် မဟုတ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိလျှင် ဆုပေးခြင်းကို ပယ်ဖျက်ပြီး နောက်မှ လူများကို အစဉ်တိုင်း ပေးအပ် သွားပါမည်။ယခုနှစ်ကျင်းပမယ့် အာဆင်နယ်မြန်မာခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲကို www.premierleague.com မှ Fantasy game ကို အခြေခံပြီးကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ တချို့ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့ ဘယ်လိုဝင်ပြိုင်ရမယ်ဆိုတာ မသိတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် အာဆင်နယ် မြန်မာဖန်တွေအတွက် ပြိုင်ပွဲ ၀င်ပုံ အဆင့်ဆင့် ကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ Fantasy Premierleague account ရှိပြီးသူများသည် အဆင့် ၃ နှင့် ၄ ကိုသာ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါ သည်။ ပြီးခဲ့သောရာသီက ပြိုင်ပွဲဝင်သူများဟာ ဒီအတိုင်းပဲ ပြန်ကစားနိုင်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ရန် မလိုအပ်သော်လည်း re-register ပြုလုပ်ရပါလိမ့်မည်။
www.arsenalmyanmar.com Fantasy Premierleage ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်းကို သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၅ နာရီ တွင် ပိတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆု - Arsenal Jersey from Arsenal Direct
Facebook Page/Group မှာ League Code and Head to Head Code သွားရောက်ယူနိုင်ပါပြီ။ Read more... Add new comment
Arsenal Myanmar Fantasy League 2012-13 - ဆုရသူများနှင့် ဆုများ	ArsenalMyanmar	ပထမဆု - kyonpyawthar ဒုတိယဆု-adipati တတိယဆု - Rangerဆု Sponsor - Martin Kewon ............................. ဆု Sponsor - Guru.............. ဆု Sponsor - daylight စတုတ္တဆု - Maungzaw ပဉ္စမဆု - Aungmyozaw Head to Head ပထမဆု -Argyi Ko Koဆု Sponsor - GunnerMyitZutar...................... ဆု Sponsor - Myanmar Gunner.......... ဆု Sponsor - Guru .................
ကျနော်တို့ အာဆင်နယ်မြန်မာက မနှစ်က ပြိုင်ပွဲအတွက် ပေးအပ်မယ့် ဆုများ စာရင်းပါ။ အခုဖော်ပြပါ ဆုများ အားလုံးဟာ Arseanl Direct Store (UK) ကနေ မှာပြီး ပေးအပ်သွားမှာပါ။ ဆုတန်းဖိုးက မူရင်းတန်ဖိုးအပြင် ပို့ခများပါ ++ ကျပါတယ်။ ကုန်ကျစားရိတ်အားလုံးကို ဆု sponsor ပေးသူများမှ အကုန် အကုန်အကျခံပေးပါသည်။Argyi Ko Ko က သူ့သားလေး ဂျူနီယာ အာကြီး အတွက် request လုပ်လို့ ကလေးအကျီ င်္ကို ဆုအဖြစ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။USA , Thailand မှ ဆုများကို အဆင်ပြေအောင် ဆက်သွယ်ြုပီး ပေးအပ်ပေးပါ့မယ်။ Myanmar က ဆုကိုတော့ ကို Guru တို့က တဆင့် တိုက်ရိုက်ပေးအပ်ပေးပါ့မယ်။ အခုနှစ်အတွက်လည်း ဆုများကို အခုထက် မနည်းပေးသွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသည်။ မမေ့မလျော့ စာရင်းပေးပြီး ၀င်ပြိုင်ကြပါ။အာဆင်နယ်မြန်မာ ပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သတ်ပြီး မရှင်းလင်းသည်များရှိလျှင် လွတ်လပ်စွာ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ Read more... Comments (2)
Arsenal Myanmar Fantasy League 2013-14	Arsenalmyanmar	www.arsenalmyanmar.com နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကျ ဖြစ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲအဖြစ် ဒီနှစ်မှာလည်း Fantasy League ကို ဆက်လက် ကျင်းပ မည်ဖြစ်သည်။ Register ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်း အဆင့်ဆင့်ကို အောက်တွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင် ပါသည်။ အာဆင်နယ်ဖန်များသီးသန့် အတွက် တည်ထောင်ထားသော ဆိုဒ်ဖြစ်ခြင်း ၊ ပေးအပ်သော ဆုများမှာ အာဆင်နယ်ဖန်များ အတွက် အာဆင်နယ်အမှတ်တရ ပစ္စည်းများသာဖြစ်ခြင်းအတွက် အာဆင်နယ်ဖန် သီးသန့်သာ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ဆုများ ပေးအပ်သောအခါ အာဆင်နယ်ဖန် မဟုတ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိလျှင် ဆုပေးခြင်းကို ပယ်ဖျက်ပြီး နောက်မှ လူများကို အစဉ်တိုင်းပေးအပ် သွားပါမည်။
ယခုနှစ်ကျင်းပမယ့် အာဆင်နယ်မြန်မာခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲကို www.premierleague.com မှ Fantasy game ကို အခြေခံပြီးကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ တချို့ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့ ဘယ်လိုဝင်ပြိုင်ရမယ်ဆိုတာ မသိတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်မယ့် အာဆင်နယ် မြန်မာဖန်တွေအတွက် ပြိုင်ပွဲ ၀င်ပုံ အဆင့်ဆင့် ကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ Fantasy Premierleague account ရှိပြီးသူများသည် အဆင့် ၃ နှင့် ၄ ကိုသာ ပြုလုပ် ရန် လိုအပ်ပါ သည်။ ပြီးခဲ့သောရာသီက ပြိုင်ပွဲဝင်သူများဟာ ဒီအတိုင်းပဲ ပြန်ကစားနိုင်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ရန် မလိုအပ်သော်လည်း reregister ပြုလုပ်ရပါလိမ့်မည်။
Read more... Comments (16)
အာဆင်နယ်မြန်မာ ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲ ဆုရသူများစာရင်း	ArsenalMyanmar	အာဆင်နယ်မြန်မာ ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲ ဆုရသူများ စာရင်းပါ။ ဒီထဲမှာ ကျနော်တို့ information လိုနေတဲ့ တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ကို Manung adipati ပါ။ မကြာခင် ဆုများကို မှာယူတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကို Manung adipati ကျနော်တို့ဆီကို အမြန်ဆက်သွယ်ပေးပါရန်။အရင်နှစ်တွေက ဆုတွေ သေချာမပေးဖြစ်လို့ အခုက စပြီး သေချာရောက်အောင် ပေးပို့စေချင်လို့ပါ။ Comments (1)
Breaking News for AM Fantasy League
Arsenal Vs Reading ပွဲကြို သုံးသပ်ချက်
အာဆင်နယ်မြန်မာ ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲ ၂၀၁၂-၂၀၁၃
အာဆင်နယ်မြန်မာ ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲ အကြောင်း
« Start Prev 1234567 Next End »	Page 1 of 7	Copyright © 2016 Arsenal Myanmar | All of Arsenal fans from Myanmar.. All Rights Reserved. Originated by Thatoe.